Ogaden News Agency (ONA) – Xukuumada TPLF Oo Kuguul Daraysatay Faragalintii Somalia + Sababta.
Xukuumada TPLF Oo Kuguul Daraysatay Faragalintii Somalia + Sababta.
Posted by Dulmane	/ June 29, 2016
War lagusoo qoray qaybta afka Ingiriisiga ee ideecada BBC-da ayaa lagu sheegay in ay xukuumada wayaanuhu kuguul daraysatay isku daygii ay doonaysay in ay kula wareegto wadanka Somalia. Sida lagu cadeeyay warkan lagu soo qoray laanta af Ingiriiska ee ideecada BBC-da waxay caqabadihii ugu cuslaa soofood saareen ciidankii Itoobiya ee sida xooga ah kugalay wadanka soomaaliya.
Qormada BBC-da ayaa cadaynaysa in ayna ciidamada Amisom ee Soomaaliya jooga ayna mudo 6 bilood ah qaadanin lacagtii ay mushaar ahaanta uqaadan jireen waxaana arintaas shaaca kaqaaday afhayeen u hadlay ciidamada Amisom ee jooga gudaha wadanka Somalia.
Sida aan lawada socono ciidamada gumaysiga Itoobiya ayaa wadanka Soomaaliya ugalay labo ujeedo oo kala ah in ay
helaan dhaqaalaha ay qaramada midoobay kubixiso howlgalka Amisom iyo in ay saamayn wayn kuyeelato arimaha siyaasada ee soomaaliya si ay danaheeda gaarka ah uga qabsato. Hadaba sida muuqata waxaa soo af meerantay
rajadii Itoobiya ee ahayd in ay dhaqaale kasamayso howlgalka Amisom iyo in ay gacanta kudhigto wadanka dasirka ah ee Somalia.
Ciidanka wayaanaha oo joogitaankooda Somalia doonayay in ay dhaqaale kuhelaan ayaa kuguul daraystay hamigoodii dhaqaale, waxayna sidoo kale gudaha soomaaliya kala kulmeen dagaalo cul culus oo ay kuwaayeen askar
aad ubadan waxayna si rasmi ah u garwaaq sadeen in ayna wax faa’iido ah ugu jirin joogitaanka wadanka Somalia.
Xukuumada wayaanaha ayaa iyadoo ka faaiidaysanaysa burburkii wadanka Somalia geed dheer iyo geed gaabanba ufuushay sidii ayna Somalia uyeelan lahayn dowlad dhexe oo awood leh waxayna kudadaashay in lahelo maamul goboleedyo yar yar oo Adis-ababa ay uga taliyaan.
Sikastaba ha ahaatee riyadii xukuumada TPLF ayaa umuuqata mid ay rajo xuma kala kulmeen iyagoo howlgalka Amisom ee qasabka ay iskaga dhigtay uu hada umuuqdo mid ay Itoobiya doonayso in ay kamuluqsiibato waloow
ayna helin fursad ay kaga dhuumato.